HP Shanje 13 uye HP Shanje 15 Laptop, makwikwi eApple MacBook Pro uye Macbook Mhepo? | Ndinobva mac
HP Shanje 13 uye HP Shanje 15 Laptop, makwikwi eApple MacBook Pro uye Macbook Mhepo?
Li-Mwedzi | | MacBook Air, MacBook Pro, Noticias
Iyo American kambani (iri muPalo Alto, California) Hewlett-Packard, yakatanga maviri laptops yakawedzerwa kumutsara wako HP Envy, izvi ndizvo HP Mhanje 13 and the HP Mhanje 15, ese akagadzirwa nechinangwa chekuendeswa kune imwechete vateereri seiyo MacBook Pro and the Macbook Mhepo de apuro... mukadzi achasunga bhurugwa rake zvakanaka here? apple kambani pamberi peichi chitsva competitorTizivisei uye tipe maonero edu.
Zvese Laptops Ivo vane aluminium casing uye vanogovera neyechinyakare Optical drive inoshandiswa kudzikisira zviyero muhukuru uye uremu; saka zviyero zve 13-inch HP Shanje ari 3.7 mapaundi pakurema uye 0.8 inches pakukora, uye avo e 15-inch HP Shanje iri zvishoma zvishoma pane inch kukora uye inorema 5.1 pondo. Pakati pehunhu hwayo hwakasiyana, kuwedzera kune saizi yeiyo screen, tinogona kuratidza kuti iyo Shanje 15 ine rutsigiro rwe mobile processor Intel Quad Core Core i7, ATI Mobility Radeon HD 4830 Graphics, 3GB DDR16 ndangariro, mavhidhiyo en Tsanangudzo Yakakwirira uye 1 GB yekuyeuka Video Zvekushandisa kwe mafomu kuona kwakanyanya; iyo Shanje 13 inoita kunge ndiyo makwikwi kunanga kubva ku Macbook Mhepo, idiki pane maviri uye pakati pezvakanaka zvaro tinogona kuratidza kukurumidza kwakanyanya mukati Video uye kukura kukuru, kunouyawo ne hard drive 250 gigs, 3GB RAM, processor Intel Core 2 DuoS, Graphics processor ATI Kufambisa Radeon HD 4330 yakatsaurirwa uye bateri kusvika maawa manomwe ari kushanda.
Zvese computers vanoshandisa teknolojia Chikara chinorova, iyo inovimbisa a kurira kwakanaka, naivowo vane skrini ine mavara akajeka uye trackpad yakafanana neiyo yeiyo Macbook, iyo inovanza bhatani hombe pasi pechiso chayo uye yave kudaidzwa "Clickpad"; ichaenda pamusika muna Gumiguru 18 ye $ 1.799 (iyo Shanje 15) uye $ 1.699 (iyo Shanje 13). Chaizvoizvo michina yakanaka ... asi, iwe unofunga ivo vanorwa ku Macbook Pro kana the Macbook Mhepo de apuro?, Ndakamirira maonero ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » HP Shanje 13 uye HP Shanje 15 Laptop, makwikwi eApple MacBook Pro uye Macbook Mhepo?
Zvakaipa, ivo vari nani zvakanyanya kupfuura izvo zvinopihwa neapuro.
Panyaya yekuratidzwa kwehardware, hongu, mukugadzirwa zvakafanana, zvinoita kunge kopi yeMacBook Pro; Kana uri muchina wakanaka, wakanaka chaizvo asi rangarira kuti tine Snow Leopard uye neizvi ndinovimba Apple haizomboburitsa iyi OS ye Hardware isiri yeapuro. Ndakatsamwa kwazvo ¬¬
Pindura kune eakger
Handina kumbozviona mushambadziro padivi pewebhusaiti, ini "ndakamhanya" kugoogle kuti ndione zvimwe uye ndozvienzanisa neacbook pro. Uye iko kwekutanga kufungidzira kwainokonzera ndekwekuti yakafanana chaizvo, asi mushure mekutarisa mac zvakare, mumwe anoona kuti ingori kuyedza, asi iyo mac is muchisisisisimo cuter. Uye zvakare, ine zvimwe zvinhu zvitsva padanho rehardware (kunze kwekiriniki yakadzoserwa shure, ndicho chinhu chete chavasina kuteedzera kubva kubhodhi), asi hachisi kutengeswa parizvino, apo chero nguva Apple inogadziridza mac uye chikamu muna 895544 zvidimbu kune Shanje. Usakanganwa kuti Mac iri Mac uye inomhanya Mac os x, uye kunyangwe hazvo hackintosh iripo, haife yakangofanana. Chimwe chinhu chandinogarawo nacho mac, ndechekuti kana mumwe munhu akakuona uine hp mune imwe square, hazvina basa, nekuti sekutaura kweHP, inogona kuve chero chidimbu chepurasitiki chine mawindo; Zvino, kana vakakuona uine laputopu ine apuro inopenya, inoonekwa padiki padiki, inokwezva kutarisisa kwakawanda.
kaputeni Kutinhira akadaro
Pane musiyano mukuru pakati pemakomputa maviri, uye izvo ndezvekuti shanje isina simba muchina une simba kupfuura mac, haina ruvara, mukombuta izvo zvirimo zvinofanirwa kukunda uye shanje kusvika zvino ikomputa ine simba zvakanyanya kuwedzera kusingaenzaniswi mune ramangwana.
Iyo Hewlett Packard Envy mushini wakanaka, ine yakanakisa maficha kunyangwe isina kufanana neiyo Mac ine Os X kubvira Mac inozivikanwa nekuve yekutanga uye iyo Shanje hachisi chinhu kunze kwekunyadzisa kopi yeMac Pro. Kunze kwechivimbiso. yeHP ine lousy, ndakazviona.
Ndine Shanje 15 uye handikurudzire zvachose. Iyo Laptop haina kugadzirwa zvakanaka uye kana iwe uchinge uchiona vhidhiyo kana uchitamba mitambo tembiricha dzelaptop dzinokwira zvakanyanya, kunyangwe irwo ruzha rwemoto runoitwa nevose vateveri varo.
Uye zvakare, nekuda kwekuparadzirwa kwezvinhu zvemakesi (aluminium), ruoko rweruboshwe rwakazorora pamusoro pechiri kana kadhi yemifananidzo kana processor uye kupisa kwacho hakutsungike, ndoda muzhizha.
Uye zvakare, mhepo yemhepo inoita kuti ibude mumativi, pakati pevamwe kurudyi ... kwaunowanzo kuve neruoko rwako negonzo ...
Pasi pelaptop panopisa zvekuti haugone kuisa ruoko rwako kunze kweanopfuura 4 kana 5 masekondi akateedzana, uye rimwe zuva unotonzwa kunhuwa kupisa ... ndinotya netafura yemapuranga uye handimboisiya on kana ndisipo Present.
Mushure mekufonera HP yehunyanzvi sevhisi vakandiziva kuti idambudziko nekugadzirwa kwelaptop asi kuti havaichinje nekuti haina kushata, asi kuti "zvirizvo", kunyangwe hazvo vane zvichemo zvakawanda. Zvinoenderana navo, vakaita bvunzo dzakanangana nekupisa uye vakaratidza kuti hazvikuvadze hutano (tenda kunaka handiti?)
HP haina kundipa mhinduro, kunyangwe kekutanga (vakasungirira pandiri…) vakandiudza kuti kana tafura ikatsva kana kukuvadza ruoko rwangu ndinogona kuvamhan'arira….
Iye zvino tungamira kumutengi uye uone zvinoitika ... saka ini handikurudzire iyo laptop yandakatenga nechishuwo chakanyanya ... uye kuti zvakandidhura sei
Pindura kuna Predator
IPod Classic yakagadziridzwa